Vote for Blog Banners Of 2010 | My Burmese Blog
Vote for Blog Banners Of 2010	On January 25, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Blogging	တစ်​နှစ်​တစ်​နှစ် အကုန်​မြန်​လိုက်​တာ အခု​ပဲ ဇန်နဝါရီ​တောင် ကုန်​ပါ​တော့​မယ်။ ဒါ​နဲ့ သတိရ​ပေ​မယ့် မ​အား​လို့ မ​တင်​ဖြစ်​သေး​တဲ့ ၂​၀​၁​၀ ခု​နှစ်​မှာ သုံး​ခဲ့​တဲ့ ဘ​လော့ဂ် ဘန်​နာ​တွေ ပြန်​တင်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ၂​၀​၁​၀ ထဲ​မှာ ဘန်​နာ ၁​၈ ခု​သုံး​ဖြစ်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဒီ​အတိုင်း စိတ်ကူး​ပေါက်​ရင်​လဲ ဒီ​ဇိုင်း​ဆွဲ​ပြီး အသစ်​ပြောင်း​သ​လို ရက်​တစ်​ခု​ခု ထူးခြား​တာ​ရှိ​ရင်​လဲ ပြောင်း​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ နှစ်​တိုင်း သုံး​ခဲ့​တဲ့ ဘ​လော့ဂ်​ဘန်​နာ​တွေ ပြန်​ကြည့်​ရင် အဲ​ဒီ​နှစ်​က ကိုယ်​ဘယ်​လို ဒီ​ဇိုင်း​တွေ အားသန်​လဲဆို​တာ ပြန်​ခန့်​မှန်း​လို့ ရမိ​ပါ​တယ်။ ဘ​လော့ဂ်​မှာ ဘန်​နာ​အမြဲ​လိုလို ပြောင်း​တာ​က​လဲ ဘ​လော့ဂ်​စ​ရေး​ကတည်းက​ဆို​တော့ အကျင့်​လို​ကို​ဖြစ်​နေ​ပါ​ပြီ။ နောက်​လဲ ပြောင်း​ဦး​မှာ​ပါ​ပဲ။ ဒီ​နှစ်​ထဲ မြန်မာ​ဘ​လော့ဂ်​ကို ဒီ​ဇိုင်း​အသစ်​ပြောင်း​ဖု​ိ့ ရှိ​ပေ​မယ့် ဒီ​ဇိုင်း​အသစ်​မှာ​လဲ ဒီ​ဘန်​နာ​ကို ပြောင်း​လို့ ရ​မယ့် ပုံစံ​မျိုး မ​ရ​ရအောင်​ထည့်​ဆွဲ​မယ့်​လို့ စိတ်ကူး​ထား​ပါ​တယ်။
၂​၀⁠၀​၉ ခု​နှစ်​က ဘန်​နာ ၁​၃ ခု​ပဲ​လဲ​နိုင်​ခဲ့​တော့ ၂​၀​၁​၀ က​မ​ဆိုး​ဘူး​လို့ ပြော​လို့​ရ​တယ်။ ၂​၀⁠၀​၈ တုန်း​ကတော့ ၁​၈ ခု​လဲ​ခဲ့​တာ​ဆို​တော့ အတူတူ​ပဲ။ ဒီ​နှစ်​က ဘန်​နာ​တွေ​ကို​တော့ အောက်​မှာ ပုံ​အကြီး​တွေ​နဲ့ တင်​လိုက်​ပါ​တယ်။ ကြည့်​ပြီး​သွား​ရင် ဟိုး​အောက်​ဆုံး​မှာ poll လေး​ပါ​သေး​တာ​မို့ ကြိုက်​တဲ့ ဘန်​နာ​တွေ​ကို vote လုပ်​ပေး​ခဲ့​ပါ​ဦး။ RSS feed က​နေ ဖတ်​ရင်​တော့ မြင်​ရ​ပါ့​မ​လား မ​ပြော​တတ်​ဖူး​ခင်​ဗျ။ Google Reader ထဲ​မှာ မ​မြင်​ရ​ဖူး​ဆို​ရင်​တော့ ဒီ​လင့်ခ် http://poll.fm/2na27 မှာ လုပ်​ပေး​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ အကယ်​ဒီ​မီ​ပေး​ပွဲ​တွေ အော်​စ​ကာ​ပေး​ပွဲ​တွေ​ကြားမှာ ဘက်​မ​လိုက်​ပဲ ကြိုက်​ရာ​ကို အားရ​ပါး​ရ တစ်​ခု​မက မဲ​ပေး​လို့ ရ​ပါ​တယ်။ ကွ​ျန်တော်​လဲ ဘယ်​ပုံ​တွေ လူ​ကြိုက်​များ​လဲ ဆို​တာ​သိ​ချင်​ပါ​တယ်။ အရင်​နှစ်​တွေ​က ဘန်​နာ​တွေ​ကို​တော့ အောက်​ဖက်​က လင့်​တွေ​မှာ ပြန်လည် ကြည့်​ရှု​နိုင်​ပါ​တယ် ကျေးဇူး​ပါ။
Single Awareness Day 2010
Happy New Year Thin Gyan
Best Banner for 2010survey software
Last Year Banners
Vote For Best Banner Of 2009
Vote For Best Banner Of 2008
Vote For Best Banner Of 2007
Blogging, Design, Personal	LeaveaReply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=3+0Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts